We Fight We Win. -- " More than Media ": လက်ပံတောင်း ဒေသခံတွေနဲ့ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ဗဏီတုို့ကြားပြဿနာ မဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့ ဒေသခံတွေ ထုိုင်သပိတ်ဆင်နွဲ
လက်ပံတောင်း ဒေသခံတွေနဲ့ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ဗဏီတုို့ကြားပြဿနာ မဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့ ဒေသခံတွေ ထုိုင်သပိတ်ဆင်နွဲ
သတ္တူတွင်းဝန်ကြီး ဦးသန်းထိုက်နဲ့ နယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ကြည်နိုင်တို့ကို လက်ညိုးငေါက်ငေါက်ထိုး ခါးထောက်ပြီးတော့ သူ့ယာခင်းလေးကို တရုတ်ကုမ္ပဏီက ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အတွက်၊ ယနေ့ တပ်မတော်ဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု အောက်မှာ နေနေရတဲ့ ပြည်သူ တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို အကာအကွယ် ပေးမှာ လား၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို အကာအကွယ်ပေးနေတာလားဆိုတာ ရဲရဲတောက်မေးမြန်း ပြောဆိုနေတဲ့ လယ်သူမကြီး။
economic injustices are everywhere.onlyasuperhero can solve them inaday.but liberalism is notapolitical idea looking out for superhero.only fascists want superhero.true.letpadaung mountain case is an economic injustice.but it is justaregional problem.notaproblem democracy and freedom itself is in danger. ...So burmese liberals and democrats should not waste their energy and attention in letpadaung case and other little things.change the constitution!!Organise and educate people to change constitution and to act in accordance with democractic rights and duties.Act for religious and racial unity.These are the real job for burmese liberals and democracts today.notatime for social fight or emotion based street fight.it is time for constitutional or institutional fight.neglect letpadaung.
28 October 2013 at 03:59